Daawo-Khaatumo ma ka Yar iga Cilooyoo ka weyn igu soo daabaa VIDEOS?. | | Horufadhi Online
Friday, July 28th, 2017 | Posted by News Hour
Daawo-Khaatumo ma ka Yar iga Cilooyoo ka weyn igu soo daabaa VIDEOS?.
Waxaan daawaday laba muuqaal oo ay kala qabteen laba kooxood, qolo waxay ahayd bilowgii bishan ka dib markii xubno saraakiil Khaatumo ahi Buuhoodle ka hadleen isla markaana sheegeen in Dhiig daadan doono hadii shir lagu qabto Buuhoodle, waxaan ka gartay Mahad Ali Qalaad oo ah abaaduullaha ciidanka Khaatumo iyo Col Cajaa’ib oo isaguna ah taliyaha Khaatumo, Curi Aadan Geelleh oo isaguna ka mid ah dadkii daafcayey Buuhoodle. HALAKNA KA DAAWO…
Hanjabaadooda anoo la yaaban ayaan arkay ka daroo Dibi-dhal, Wasiirkii Amniga Khaatumo oo leh anagoo fulineyna heshiiskii Adis Ababa ayaan iskaashanaynaa Somaliland oo shir lagu qaban maayo Buuhoodle, HALKAN KA DHUGO ISAGANA. Waxaa wax lala yaabo ah in kuwii la doonayey in dalka laga xoreeyo la dhaho waa la kaashanayaa, ayadoo aan meelaba lagaga waramin dhulkeey haysteen, ciidamadii la kala direy ee Buulka laga dhigayna maanta boodhka laga jafay, Kayse iyo kooxda ka horaysa waan hubaa inaysan maamulkooda mooyaane cid kale afkooda ku hadlayn, dadkuna inay sidaas u fahmaan ayaa wanaagsan, colaad deegaanka reer Caymeed iyo ehelka wada degan u dhaxaysaana ma jirto, Webebka yar yar ee beelaha magacyadooda adeegsanaya ee leh laba beelood ayaa la isku dhufanayaana, waa inay fahmaan in labada beelood ee waa weyn ee walaala ah aysan Kayse iyo mid la mid ah toona iska horkeeni karin, Kaysena cid beel ku raacsan ma jirto, fekerkiisana isaga iyo Madaxweynihiisa ayuu gaar u yahay.
Wiilashaasna hadeey Ciidan Khaatumo yihiin cadowgu dhulkuu joogo ha xoreeyeen hadii kalena, ninkastaa wiilkiisa iyo qorigiisa xun ee AK47ka ah ha soo qabsaddo, siyaasaduna hadeey leexato waxay keentaa faashil,Kayse haduu uusan dooneyn shirka Buuhoodle isagoo Khaatumo ah ha ka hor yimaado balse isagoo Somaliland oo cadow u ah dadkan iyo dalkan Garabsanaya iyaga uun buu ka mid noqoayaa ee cidkale Garab iyo Gaashaan toona ka heli maayo, deegaanada uu tiriyey Widhwidh oo uu isagu xabadoo dhacaysa Somaliland kula shiray mooyaane waxay ka mid yihiin deegaamadii Difaaca Buuhoodle ka qayb qaatay, xata Gurmadkii Widhwidh ka imaanayey waa tuu celin kari waayey jiida Kalshaale galayey, hadana Difaaca Buuhoodle iyo meelkastoo kale oo Dhulka Khaatumo ah ayeey diyaar u yihiin, Hadalkaagana wuxuu adeeg u yahay cadowga aad amaanayso, ee aad leedahay waan kaashanayaa.
Dadka Xasarada wada ee dadka isku soofeenayana Kayse Abdi Yuusuf kooxdii hore ee Buuhoodle ka hadashay uun buu la Kiis yahay, wuxuu kaga duwan yahay iyo sabab reer loogu Aneeyo midna ma jirto, cadowguna sidaas ayuu doonaya inuu magacyada qabaa’ilka Dhulbahante oo la isku xuuxinayo ku arko warbaahinta iyo baraha bulshada, Khaatumo ha keento siyaasad aan ahayn Somaliland ayaan kaashanaynaa hadii kale kuraasta dadka ha u baneeyeen ama Buuhoodle ha ku shireen ama Balicad ha ku shireen umaduyye.
Abdulaahi Aadan Guleed
Short URL: http://horufadhimedia.com/?p=48271
Posted by News Hour on Jul 28 2017. Filed under fikradaha, wararka. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
8 Comments for “Daawo-Khaatumo ma ka Yar iga Cilooyoo ka weyn igu soo daabaa VIDEOS?.”
July 28, 2017 - 6:07 am
DHULBAHANTE MAGACIISA WAXA DILAY DHUUNI QAATE EE AAN EEGNO MEESHAY KU DAMBEEYAAN
July 28, 2017 - 10:40 am
Dhulbahante is dilayaa ma jiro ee waxaa la diidan yahay Shir pintiland dabada Ka riixayso oo doc faruur ah in lagu qabto Shaxda buuhoodle.
Wixii siyaasad ah waxaa dhulbahante uga wakiil ah maamulkeena khaatumo state of somaliya.
Somaliland la kaashanayaa ma jirto ee ciidanka balicad ku kulmay waa wiilashii dhulbahante ee sanad kahor is eryan jiray ee is dilimayso jiray ayaa maanta shaah wada cabaya oo is baranaya oo sheekaysanaya.
Mid kale waxaan leeyahay nimanka xamar ku shiray hadii aad Dan Guud oo dhulbahante wadaan intaad Garowe Ka dhooftaan xamar Kama aydaan Soo hadasheen ee dhulka dhulbahante ayaad joogi lahaydeen oo go’aamadiina Ka Soo saari lahaydeen.
Nimankan Isimada sheegta waxaan u sheegayaa in loo doortay jifooyinka dhulbahante in ay magta u kala qaadan oo ay Geedka Hoostiisa Fadhiyaan ee looks dooran in ay dhinac rooran hawlo aan loo diran
Keyse iyo Caliba waxay ka mid noqdeed huubadii salka ku hadhay kadib markii dhulbahante kala baxay.Wallee dhulbahante kala bax sabankan.CALI ISXABAAL iyo kun kale oo la mid ah qoor qabasho dhulbahante kuma dhiibi karaan.watch this space!
Nolol Baan Rabna iyo Horumar iyo Shaqo abuur
July 28, 2017 - 2:22 pm
Ninkan oo Ingriiska jooga oo degan wadan gaalo iska leedahay oo isaguna ka mid noqday bulshada wadankaan ma wuxu leeyahay Buhoodle iyo qorilugud oo muslim ah oo Soomali ah oo isku degaan ah baan wax wada yeelan karin? Kkkkkk waxan oo kale in horufadhi.com ka sii deyso webkeedaba ma aha.
Ninkan oo 1991 ka cararay dagaal oo wadan gaalo uu baxsaday ayaa ku baqaaya maanta in degaan aanu soo cag dhigin 27 sano dagaal beleed galaan, mala waxa haboon in ninkaas la yidhaahdo kaalay adigu dagaalan, ama kaalay wadanka deg hadi aad rabtid in aad siyaasada ka hadashid. Balse anigo qurbaha jooga aan cambaarayeyo siyaasiyiinta beesha ee wadanka jooga ma aha wax laga qaadanayo.
Caruurahaagu uma dhiman shuban biyood iyo cuduro iyo gaajo, waa dadkan aad leedahay ha dagaalaman, kolkaas Keyse Cabdi Yusuf iyo Cali Khalif Galaydh waxa ay rabaan in nolosha aad adigu ku haysatid qurbahaas ay siiyaan dadka wadankooda jooga, kolkaad adeer kheyr ku hadal ama qurbahaagaas iska joog balse dhibka iyo munaafiqnimada iyo colaad hurinta inaga dhaaf, hadi kale dowladaad joogtid baanu kaaga dacweyn in aad tahay argagaxiso dal kale dagaal ka abuuraya.
wax dhicidoona ilaahay baa og laakiin nin baa laga hayaa biyahaan horaantoodii arko dabadoodana maxaad mooday dabcan waa huubo.ninkii cali geri caanaha ku shubay cid uu heshiisiiyo daayo habayn cag madhigin.waxa uu ka shaqaynayaana waa wax aanu kafiirsan xumaanta uu ka dhaxlidoona balse waxaan ku talin lahaa tolow colka jooji
July 28, 2017 - 4:57 pm
Asc. Jaw, waar hadmay magan Alle dagaal noqotay? Waar dantayadaannu ka shiraynaa hadmay dagaal noqotay?
Midda kale, qoladan DASTUURKA HANNALOO FURO tolka u faataadhug badanaa. Sow kuwii macaa garaadkooda illaa EERIGOO la geeyey maaha, oo weliba BURTINLE ka soo wareegay. Sow kuwii loo diiday in magaaladoodii WIRWIR ay maytida ku aastaan maaha. War anukaa wax aragnay!
Waar haddaad is leedihiin kooxda AWR-BOOGAYS & ADHICADEEYE buundooyin dheeraada si ISAAQ idiin soo dhowaysto, waaba saad ku socotaane, WIRWIR IYO SAAXDHEER ma idin ku filnaanwaayeen? Maxaad sida luubaanka BUUHOODLE iyo shirkeeda ugu meeraysanaysaan? Mise wuxuu SIILAANYO shuruud idinkaga dhigay in aad SHAXDA soo taabataan, waaba sida ay tahaye, si la idinkaga hormariyo kooxda ina XIIR iyo BAASHE horboodayaan?
War shirkaasi waa qabsoomaya, insha Allah, guul buuna ku dhammaanaya cid Alle ka sokaysa oo is hortaagi kartana maleh. Idinna wixii la idin ku tuhmayey uun baad soo daacdeen; maanta wax idiin qarsooni ma jirto e HARGEYSA iyo BURCA lasoo dagaal gala oo ku soo dabagabbada, sidaad sheegateen, bal in aad caano ka dhantaan.
Nimanyahow aniga waxaa layaab igu ah
Dhulbahante ma shir maskax kale ah ayuu ku jirayaa miyaanay dhaafayn oo ka gudbayn shir
Waar kan shirka ku baaqayaw makii Taleex shir kaweyn ayaa dhici doona.
Shir shir shir yare waa hadal ma gudbe
Maxaad ka shiraysaa yaadse u shiraysaa yaadse lashiraysaa yaase kula shiraya.
4900 oo qof oo derajo kasta leh ayaa
Taleex ku shiray waxay isku raaceena waad mucaaradaysaa SAAXDHEER IYO WIDH WIDH Awr BOOGAYS IYO ADHI CADDEEYE ayaad gaar u tilmaantay khaatumo na waad sheeganaysaa
Yay waxkaala dhexeeyaan haddaba.
Shirka ka gudub oo khayrkaa la talaabso khayr kaa kahadhe kaba hadhaye.
Shir uun ha taagnaane for 30 years
Hadaad dhoosha ka qosleysey shalay markii EERAGOO La i eryanayey iyo Saaxdheer adigana maanta ayaa lagu eryanayaa somewhere.
Iska shira kala shira isu shira midnimadii Dhulbahante ey ayaa cunay.
Waxaas oo hadala nin ayey u socdaan aan moodi jirey inuu intaa dhaamo balse Wuu fashilmay